မြန်မာပြည်သူလူထု ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့မွေးနေ့(ဇွန်လ ၁၉ ရက်နေ့ ) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanma News » မြန်မာပြည်သူလူထု ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့မွေးနေ့(ဇွန်လ ၁၉ ရက်နေ့ )
မြန်မာပြည်သူလူထု ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့မွေးနေ့(ဇွန်လ ၁၉ ရက်နေ့ )
Posted by Bayote on Jun 19, 2010 in Myanma News, News | 12 comments
အမေ။ သားတို့ကို ခွင့်လွှတ်ပါ။ အမေအများကြီး အနစ်နာခံခဲ့ပေမဲ့ အမေ့သား သမီးတို. တာဝန်မကျေခဲ့ပါဘူး။
အမေတောင် ၆၅ နှစ်ပြည့်ပြီ။
အမေ သက်ကျော်ရာကျော် ရှည်ပါစေ လို့ သားတို. သမီးတို့ ပြည်သူလူထုအားလုံးက ဆုတောင်းပေး လိုက်ပါတယ်။
Be peace ,happy and healthy
ပြည်သူတွေရဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကျန်းမာပါစေ။ ပြည်သူတွေကို လွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့ ဦးဆောင်နိုင်ပါစေ။
အားလုံးနဲထပ်တူ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အသက် ၁၂၀ ကျော်ရှည်ပါစေ……..
mom, may u be peace, happy and healthy…….
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဦးဆောင်တဲ့တိုင်းပြည်ဖြစ်ရင် ပညာတွေ၊ အရင်းအနှီးတွေ၊ အတွေ့အကြုံတွေ၊ စွမ်းအားတွေနဲ့ ပြည်တော်ပြန် တိုင်းပြည်အလုပ်အကြွေးပြုမဲ့ သားတွေ၊သမီးတွေအများကြီးပါ။
အခုတော့ သားတုိ့၊သမီးတို့တတွေ စောင့်နေကြဦးမယ်ပေါ့။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သက်ရာကျော်ရှည့်စေဖို့ ဆုမွန်ပို့သပါတယ်။
ဘ၀ ဆိုတဲ့ အချိန်တိုလေး အတွင်းမှာ ကျနော်တို. အတွက် တာဝန်ကျေတဲ့ မိခင်တစ်ယောက်ရလို့ ဘုရားသခင် ကို ကျေးဇူးတင်မဆုံးပါ။ အမေနဲ.အတူ သားတို.က အမြဲရှိနေမှာပါ။ သားတို. နှလုံးသားမှာ အမေ အမြဲရှိသလို၊ သားတို.မြန်မာနိုင်ငံ လဲ သားတို. သွေးထဲမှာ အမြဲရှိနေဆဲပါအမေ။
အမေစု တစ်ယောက် အမြန်ဆုံး လွှတ်မြောက်ပါစေလို. အမေ့မွေးနေ.မှာ သားတို. ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ သားတို.ဘ၀ ထက် မိသားစုထက် သားတို. နိုင်ငံကိုပိုချစ်တယ် အမေ။ ထာဝရချစ်သွားမှာပါလို. ကတိပေးပါတယ် အမေ။
ကျနော်တို့ ကလည်း Kai လို နိုင်ငံချစ်၊ မျိုးချစ်စိတ် ရှိတဲ့ ပညာတတ်တွေကို ကြိုဆိုလျှက်ရှိနေပါတယ်။ ကျနော်တို့ ရည်မှန်းချက်က မြန်မာနိုင်ငံ အမြန်ဆုံး တိုးတက်ရေးပါ။
စည်းကမ်းရှိပြီးလွတ်လပ်တဲ့ ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံဖြစ်ပါစေ….
အန်တီစုရယ်..အန်တီစုမွေးနေ့ မိုလို့ connection တွေချထားတယ်
အဖဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ မျိုးဆက်သစ် စစ်စစ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ အမေဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ယခုအသက်၆၅ နှစ်ပြည့်မှသည် နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင် ကျန်းမာချမ်းသာစွဖြင့် တိုင်းပြည်အကျိုး၊ နိုင်ငံ့အကျိုး၊ ပြည်သူ့အကျိုးကို လွတ်လပ်စွာထမ်းဆောင်နိုင်သူတစ်ဦးမြန်မြန်ဖြစ်ပါစေလို့ ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်…